Fandinihana momba ny tetik'asa momba ny harena ankibon'ny tany, Sand sy ny graffes - Ellicott Dredges
Case Studies, Fitrandrahana Sand sy Gravel
Ny vokatra-tsarobidy natolotry ny rafitra fanesorana sediment dia mampitombo ny fiarovana ny reniranon'i Shenandoah
Loharano: Fanodinana simika Ny fiarovana ny renirano Shenandoah sy ny famerenana ny hidrokida azôty dia samy azon'ny Avtex Fibers, mpamokatra rayon an'ny firenena betsaka indrindra amin'ny alàlan'ny fampiasana remover sediment azo entina. Nandritra ny taona maro, Avtex dia nanondrika hydroxide zinc, vokatra azo avy amin'ny dingam-pamokaran'izy ireo, ho any amin'ireo dobo manodidina ny zavamaniry. Ireo dobo nanorim-ponenana hita tao amin'ny zavamaniry Avtex's Front Royal any Virginia dia nanomboka tampoka feno fotaka sy antsanga - antsanga sarobidy - satria tapa-kevitra fa raha azo averina ny zinc hydroxide dia azo zahana ho sulfate zinc mahasoa ....
DREDGES manokana amin'ny fitrandrahana elektrika - "Stelinha V", "Stelinha VI" ary "B890E"
Tompony - Mineracao Taboca, Brezila FIZARANA FAMPIANARANA: FIZARANA PRINCIPAL: "Stelinha V" "Stelinha VI" "B890E" Hull Size - halavan'ny tongotra 110 "81" 56 Ny halalin'ny fitrandrahana fatratra 36 ′ 26 "21 ′ Haben'ny savony - ID 16 ″ 14 ″ 10 ″ Fantsahana famoahana paompy - ID 16 ″ 14 ″ 10 ″ Herinaratra pump 500 600 350 Excavator Horsepower 250 100 40 Total Horsepower 1000 850 420 INFORMATION PROJECT: Hatramin'izao dia ireo mpitrandraka kodiarana roa amin'ny tranokala tokana no miasa amin'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany manankarena indrindra any Andrefana any Pitinga, any amin'ny fantsakan'i Amazon any Brezila. Any amin'ny 300 km avaratra atsinanan'ny reniranon'i Amazon no misy ...
Fifidianana ny fanondranana sy fanodinana fitaovana ho an'ny Auriferous (volamena) Deposito alluvial (Fitrandrahana volamena miaraka amin'ny afisy amin'ny bucketwheel)
Loharano: Fitrandrahana harena an-kibon'ny tany & fanamboarana izao tontolo izao Nandritra ny taona maro dia maro ny fitsapana ara-batana novolavolaina mba hahafahan'ny fikambanana mpitrandraka volamena manadihady lafin-javatra maro amin'ny faritra kasaina. Ireo fitsapana ireo dia miovaova arakaraka ny fomba nesorina tamin'ny fitrandrahana. Raha ny dredges, dredges fitaovana misy excavator manokana, ilaina ireto fanandramana manaraka ireto ho an'ny fanombanana: takina ny fiolahana granularmetric feno izay solontenan'ny vatan'ny voa iray manontolo, indrindra raha mety misy fitaovana mihoatra ny fahaizan'ny dredge ny vatana. mihady na mitondra. Hiteraka ny fampahalalana mahafa-po amin'ny fanolorana an'ity ...
Dredge dia mampiroborobo ny famokarana sira any Sina “Tetikasa fitrandrahana ny farihy masira ao Xingjiang,” Repoblikan'i Sina
Loharano: Fitrandrahana harena an-kibon'ny tany & fanamboarana tany amin'ny faritra lavitra any avaratrandrefan'i China, nanomboka tamin'ny 1958 ny fitrandrahana sira misy an'i Mirabilite, nanohana tanàna kely iray. Ny zavamaniry ara-tsimia any Xingjiang Salt Lake, any amin'ny faritanin'i Xingjiang any Shina, dia manodidina ny 70 km atsinanan'ny tanànan'ny Urumqi. Harena ankibon'ny tany dia natao voalohany amin'ny backhoes sy nanome sakafo kely fanodinana fototra. Ho fanampin'ny Mirabilite, ny sira hafa dia alaina ary ampiasaina amin'ny indostrian'ny varotra ao Shina. Tamin'ny taona 1980 dia nanomboka nahazo toerana ny indostrian'ny dredging amin'ny famoahana dredge suction bucketwheel amin'ny indostrian'ny harena ankibon'ny tany. Tamin'ny tapaky ny taona 1980, niaraka tamin'ny fanampian'ny ...
Ellicott® mandefa Bucketwheel Dredge mankany amin'ny Volara volamena Breziliana
Ellicott® International dia nivarotra dredge bucketwheel tamin'ny orinasa Breziliana iray amin'ny fitrandrahana volamena any Amazon. Mineracao Trans Amazonica (MTA) nametraka ny Ellicott® Brand B890 "Wheel-Dragon ™" eo amin'ny fanompoana dredge akaikin'ny Reniranon'i Paru andrefan'ny Jari tany akaikin'i Monte Dorado, Brezila.
Vokatra Mineraly DuPont - Fomba fitrandrahana harena ankibon'ny tany
Fitrandrahana mitrandraka mavesatra dia amina dingana maromaro na filaharan'ny fandidiana. Ireo dingana ireo dia voafaritra eto ambany filaharana. Manadio ny voalohany, ny ala azo amidy rehetra dia alaina avy amin'ny faritra fitrandrahana eo noho eo. Vatan-doko, fihenam-bavony sy borosy sisa no arotsaka ary tondraka avy amin'ireo traktera mpandrafitra. Ity fitaovana ity dia avela maina sy may. Avy eo i Topsoil dia esorina ao anaty halalin'ny 6-8 ao ary na kitapom-bola hangonina ao aoriana kely na apetraka mivantana ao amin'ny toerana fitrandrahana mifanila. Ity asa ity dia tanteran'ny mpandrafitra vy iray misy kodiarana 23-yd3. Fanariana ny molotra Ny voanjo dia nolanjana miaraka amin'ny Ellicott® namboarina ...
Ellicott® Brand Cutterhead Dredges fanampiana amin'ny tetikasan'ny fitrandrahana manerana an'i Etazonia, Eoropa ary Azia
Loharano: Ny dredging eran-tany sy ny fanamboarana an-dranomasina Ellicott® dredges vita amin'ny fantsom-pandrefesana fantsom-pandrefesana vita amin'ny rano no ampiasaina matetika amin'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany sy ny fiombonambe manomboka amin'ny arina ka hatramin'ny firaka ka hatramin'ny agregat. Fanarenana saribao Ao amin'ny toeram-pitrandrahana arintany atsinanan'i Pennsylvania, ny sazy arina arintany izay heverina fa tsy mandeha amin'ny laoniny dia voahosotry ny dredge cutterhead an'ny marika Ellicott®. Noho ny fandidiana, fiara hatrany amin'ny 30 ny lalamby, indray andro ny arina arintany, izay ahafahan'ny mpampita herinaratra hamatsy solika mora vidy ho an'ireo mpamokatra setroka. Ny dredge Niasa avy amin'ny tapaka tongotra mihoatra ny 185 lalina izay dia heverina fa ...
Ekipa Dredges miaraka amin'ny Draglines amin'ny fanadiovana ny renirano haingana taorian'ny Mt. Momba ny fipoahana volkano ao St. Helens, Etazonia
Loharano: Gazety Highway & Heavy Fanamboarana dredge hydraulic roa lehibe, miaraka amina singa kely mitsinkafona kely kokoa sy tarika mifototra amoron-dranomasina, manodidina ny 60,000 cu.yd ny fitrandrahana rano isan'andro raha toa ka manadio haingana ny efatra kilaometatra amin'ny renirano Cowlitz feno lavenona taorian'ny fipoahan'ny Mt. St. Helens. Saingy ny famongorana ireo sambo lehibe, fitaterana azy ireo ary fanangonana indray ary fandefasana azy ireo dia naharitra dimy herinandro. Canonie-Bultema Pacific Corp., sampana iray an'ny The Canonie Companies, Inc., South Haven, Michigan, dia nampiasa fomba fiasa an-dranomasina rehefa nanadio manodidina ny 4.4 tapitrisa cu.yd. sediment sandy avy ao amin'ny reniranon'i Cowlitz ambanin'ny fifanarahana roa mifandimby ho an'ny Corps of Engineers. Ny fifanarahana dia ...
Dredging tao amin'ny Marcopper any Philippines
Loharano: Ny toeram-pitrandrahana varahina madinidinika any Asia Pasifika Marcopper dia eo akaikin'ny afovoan-tany any amin'ny faritanin'ny nosy Marinduque ao amin'ny nosin'i Filipina. Ny nosy 780 kilometatra toradroa dia 170 kilometatra atsimon'ny Manila. (Marcopper dia sampana iray an'ny Placer Dome.) Marcopper Mining Corporation dia notendrena hanana milina 15000 taonina isan'andro. Ny rambon'ny fikosoham-bary dia natsipy tany amin'ny lohasaha San Antonio izay akaiky azy 4 kilometatra avy eo amin'ny mpiorina. Tohodrano roa no namboarina niaraka tamina sisin-damban'ny sisiny roa amin'ilay lohasaha mba hananganana fidinana na fantsakana. Ny ampahany lehibe amin'ny ...
Ellicott Machine Corporation dia manolotra Dredger fitrandrahana fasika lehibe indrindra eto an-tany
Loharano: Fampandrenesana iraisam-pirenena momba ny dredging & fanamboarana seranan-tsambo an'ny "COOLJARLOO I" lalina indrindra 25 m, min 4.6 m Pompatra Dredge Ellicott® 24 in. Paompy mitaingina 2,000 HP (1491 KW) Milanja maina manodidina ny 2,700 taonina famatsiana herinaratra amoron-dranomasina 22,000V / 3-ph / 6047 Sifotra savaivony 23.52 in. Famarana savaivony fantsom-batana 23.62 in. Herinaratra napetraka 4,100 hp (3057 KW) Ellicott Machine fiaraha-miasa ao Baltimore, Maryland dia nahavita tetik'asa turnkey hamolavolana sy hananganana izay heverina fa lehibe indrindra manerantany dredger fitrandrahana fasika foana. Christened "COOLJARLOO I", ny dredger bucketwheel dia namboarina ho an'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany any Australia Andrefana. Ary amin'ny ankapobeny ...